Xisbiga WADANI oo dhoolatuskiisii ugu dambeeyey ku soo bandhigay Somaliland
ololihii xisbiyadda ee saddexda toddobaad socday ayaa maanta soo gabogabowday, waxaana soo afjaray xisbiga mucaaradka ah ee WADANI oo isagu nasiib u helay inuu noqdo xisbiga ugu dambeeya ololaha asxaabta.
Xukuumada Somaliland oo Maanta ka Hadashay Xiritaanka Xafiiska Midowga Yurub ee Hargeysa
Wasiirka Arrimaha Dibadda Somaliland, Maxamed Biixi Yoonis ayaa maanta sheegay inay si Hoose u maqleen in Ururka Midowga Yurub ay yareynayso Shaqada Xafiiska ay ku lahayd Magaalada Hargeysa.
Deegaanada ay ka kooban tahay Somaliland oo ay ka bilowdeen roobkii Guga
Magaalada Hargeysa ee xaruta Somaliland ayaa shalay illaa maanta waxaa ka da’ayay roob lagu qabowsaday, iyadoo lagu jiray baryahan xaalad abaarood iyo biyo yaraaneed.
Wasiir ku Xigeenkii hore ee Amaanka Somaliland oo xalay guriisa lagala baxay
Ciidamadda Ammaanka Somaliland, ayaa xalay saqdii dhexe gurigiisa kala baxay wasiir ku xigeenkii hore ee Amniga Cabdilaahi Abokor.
Munaasabada 18-ka May ee gooni isu taaga Somaliland oo saaka ka bilaabatay Hargeysa iyo magaalooyin kale
Munaasabado ballaaran oo loogu dabaal degayo 18-kii May ee gooni isu taaga Somaliland ayaa saaka ka socda magaalada Hargeysa iyo magaalooyinka kale, iyadoo ammaanka guud si aad ah loo adkeeyay.
Soomaaliland oo sheegatay in ay Maamulka Puntland kala hadashay dajinta xiisada labadooda ka dhaxeyso.
Somaliland ayaa markii ugu horreysay ka dhawaajisay inay Puntland kala hadashay dajinta xiisdaha dheleed ee ka jira gobollada Sool iyo Sanaag oo ay labada maamul isku hayaan.
Somaliland oo beenisay inuu bur buray wada hadaladii u dhaxeeyay dowladda Soomaaliya
Maamulka Somaliland ayaa maanta beeniyay inuu bur buray wada hadaladii u dhaxeeyay iyaga iyo dowladda Soomaaliya, kadib markii ay dib u dhac ku yimaadeen wada hadalo lagu waday in dhamaadkii sanadkii hore ku dhex mari lahaa dalka Turkiga.